Howl xasaasi ah oo saxaafadda maxalliga laga doonayo xilliyada doorashada oo maqan | Hadalsame Media
Home Maqaallada Howl xasaasi ah oo saxaafadda maxalliga laga doonayo xilliyada doorashada oo maqan
Howl xasaasi ah oo saxaafadda maxalliga laga doonayo xilliyada doorashada oo maqan
(Hadalsame) 06 Okt 2021 – Xilliyada doorashada, warbaahinta dunida si madax bannaan ayey diiradda u saaraan ol’olaha socda iyaga oo sameeeya;
1 – Doodo
2 – Fallanqeynno
3 – Dabagallo ka dhanna xisbiyada iyo shaqsiyaadka baratamaya
4 – Natiijo odoros (Polling predictions)
Dabcan, waxaa jira warbaahin gaar ah oo taabacsan maamulka markaa talada haya ama mid mucaarad ah!
Saxaafadda Soomaaliya meeshii laga rabay in ay bulshada siiyaan macluumaadkaas kore si ay ugu dhisaan xulashadooda, laba mid ayey ku dambeeyaan
1 – AAMUSNAAN
2 – KU DHEX MILANKA OL’OLAHA
Waxaan su’aashan weydiiyey wariye ka tirsan mid ka mida warbaahinta Soomaaliya sababta ay u bilaabeen baahinta wararka lidka ku ah maamulka jira? (Nabad iyo Nolol!)
Waxaan su’aashan u weydiiyey Telefishinkaas X muddo afar sano ah ma sii deyn jirin wararka iyo dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ee dadka dibadda ka jooga nidaamka! Balse marka aan su’aasha weydiinayo waxa uu baahinayey wax walba oo jiray!
Waxa uu si sahlan igu sheegay in la galay xilli doorasho oo ay hadda IS BEEC GEYNAYAAN, musharax walba u furan yihiin oo ay KISTA ka qaadayaan!
Marka warbaahintu LACAG ka dhigato YOOLKA ma noqon karto mid madax bannaan oo waxa ay ku qasban tahay in qofkaas ay KISTA ka qaaday in aysan wax liddi ku ah baahin iyo in ay waxqabadka uu sheegto run iyo beenba sii deyso! Waxa ay isugu soo uruureysaa xarun II DHEH ah!!
KU MILANKA OL’OLAHA
Marka laga soo tago mabda’a ah in qaab ii dheh ah lagu shaqeeyo, waxaa suurtagal ah in dhammaan wariyeyaasha mid walba uu si hoose ula shaqeeyo musharax Y, taas oo sii dileysa tayada dhacdadii ay bulshada ka sugeysay!
Arrintan waxa ay horseeday in doorasho walba cod bixiyeyaasha (Dabcan, dooradhada dadban) iyo shacabka in aysan helin macluumaad sax ah oo ay ku go’aan qaataan! Cod bixiyeyaashana JEEBKA shiishkaa saaraan, shacabkana QABIILKA!!
Previous article”Waxaan ka dagaallamay dalal badan balse abid ma arag wax aan u dhigo geesinnimada Soomaalida” – Askari Muqdisho ka dagaallamay oo billad geesi la siiyey
Next articleArrin ay aad ugu dhibban yihiin dadka reer Muqdisho oo halkeedii kasii socota (Maxaa dhacay habeen hore?)